Isiteleka Fx EA ukubuyekeza - Kuhle Forex EA sika | Isazi Advisors | FX Robots
IkhayaStrike Fx EAStrike Fx EA ukubuyekeza
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi Strike Fx EA 0
Price: $ 179 (1 selayisense, FREE Updates & UKUSEKELWA)
Currency ngababili: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, EURAUD, GBPCAD, GBPCHF futhi AUDNZD
Ukuhlaselwa kwe-Fx EA Review - Umhlomulo we-Forex Expert Of New Generation
Strike Fx EA inamandla Forex Expert Advisor futhi inenzuzo I-Multicurrency Martingale FX Robot Yokuhweba owadalwa Argolab ithimba (ngubani oye wakha FXSplitter EA kanye) futhi isebenza ngokuphelele ngokuzenzakalelayo.
Argolab wazama ukuphendula umbuzo eyisisekelo kakhulu bonke abadayisi abasebenzisa i amasu martingale ezisekelwe:
Kungenzeka yini ukusebenzisa martingale futhi ungesabi bokulahlekelwa imali yakho?
Sikholelwa ukuthi impendulo omuhle ukuba lo mbuzo khona.
Ngakho, umgomo ekuthuthukiseni lobu Strike Fx EA kwaba ukumisa i-imvelo ukuhweba okwesikhathi olandelanayo martingale zokuhweba. Bawenza kanjani ukufinyelela lokho? Izimiso eziyisisekelo salokhu Isazi Advisor:
1. Trade amathuluzi amaningi (currency ngazimbili),
2. Lawula amathuluzi kanyekanye adayiswa, ukuze unciphise ingozi drawdown kwehlisa,
3. Ungabi abahahayo, ukuthatha izinto emakethe kukunika,
4. Uma umbhangqwana siphela lokulawula, fixate umonakalo ekuqaleni bese uqhubeke zokuhweba.
I-Flex Fx EA - Yiziphi Ukuhlukana Kweminye iMartingale EA?
Strike Fx EA ayisebenzisi noma yimaphi igridi ne ibanga esinqunyiwe phakathi oda (njengoba Forex Warrior) noma fixed isikhawu phakathi oda (njengoba FxSplitter). Ibanga phakathi oda kungaba ngokungenasizathu ezinkulu (kodwa hhayi ezincane kuno abanye okungenani), futhi isikhawu esiphakathi oda kungaba futhi ngokungenasizathu ezinkulu (kodwa hhayi ezincane kuno abanye okungenani). EA njalo ihlaziya nezimo zezimakethe futhi unezela oda amasha ukuze kubhasikidi kuphela uma kubalulekile ngempela, futhi ngokwenza kanjalo, lingena emakethe by intengo engcono.
Lokhu Isazi Advisor akasebenzisi olunqunyiwe azithathe inzuzo ezingeni kubhasikidi, fixed ngokumelene ezingeni Breakeven noma emyalweni nge intengo engcono. Strike Fx EA njalo kabusha ulungisa Take-nzuzo ngokuvumelana nezimo zezimakethe.
The Forex Robot angakwazi ukuphuma emakethe ngokulahlekelwa okuncane ezimweni lapho imakethe "iwa phansi" futhi intengo ihlanganisa ibanga elikhulu ngesikhathi esifushane.
I-Flex Fx EA - Izici Eziyingqayizivele zale Meluleki Wama-Forex Expert
Isici esiphawulekayo Strike Fx EA iyona ukuhweba multicurrency nge control ingozi. Uqukethe ezikhethekile Control Centre, lapho uqaphe isibalo ukuhweba ngazimbili, inani ukuhweba zezimali kanye isiqondiso abathengisa. Ngokusekelwe kulolu lwazi, i-Expert Advisor evumela noma unqabela ukuvulwa obhasikidi entsha. Control Centre kuvimbela inani zezimali adayiswa ngesikhathi esifanayo luhamba luye ohlangothini olulodwa.
Inani okuzenzakalelayo 1. Lokhu kusho ukuthi uma Strike Fx EA is ngidayisa, uthi EURUSD eside, ngeke uvule noma yiluphi entsha XXXUSD obhasikidi eside noma USDXXX obhasikidi emifushane (kodwa kungavula XXXUSD amabhasiki ambalwa).
Ngaphandle kwalokhu, i Control Centre kuvimbela lonke inani ukuhweba ngazimbili kanye drawdown evulekile, okuyiwona ukuvulwa obhasikidi entsha uvunyelwe.
Lokhu FX Robot isebenza kahle kubathengi abaningi, ama-4-amadijithi kanye nama-5-amadijithi afanayo. Ungase ufise ukukhetha umthengisi ngokusabalalisa okuncane okwenziwe ngababili ukuthi uzohweba futhi ulinganise ukusondeza. Uma i-akhawunti yakho idiphozithi ayikho enkulu ngokwanele yokusetha imali efanele, ungase ufise ukusebenzisa i-akhawunti eyikhulu futhi lokhu kuzokhawulela umthengisi wakho, ngoba akuzona zonke ezinikeza ama-akhawunti angama-cent.
Strike Fx EA yasungulwa ngo-i team uchwepheshe abadayisi professional abafuna ukukubona uphumelele!
I-Flex Fx EA - Ayingazijwayele Ukuhweba Nge-Forex?
Ukuhweba Forex imfushane for Foreign Exchange Trading futhi libhekisela inzuzo noma ukulahlekelwa ukuthi senziwa ngidayisa zezimali ezahlukene angaphandle ngokumelene nomunye. Ucwaningo izimakethe ezahlukene zomhlaba wonke, indlela izenzakalo geo-zezombusazwe kuthinte lawo izimakethe ukuhlaziywa ukuzinza ezingeni womnotho ezithile izici ezisiza abadayisi ekuhloleni okuyinto izimali zakwamanye amazwe imayelana ukuze uqinise ngomunye.
Yenza ukusetshenziswa kwe Strike Fx EA bese ziphenduka utshalomali yakho ibe GOLD!
isiteleka Fx EA - Mayelana Nezokuhweba Logic, Ukusetha Nokunye Okudingekayo
Strike Fx EA ihlaziya futhi inquma isiqondiso intengo for the next umbhangqwana amahora noma izinsuku. Futhi lokhu Umeluleki Isazi ikuvumela ukuba ukudayisa izingozi kumele bucaciswe, nenzuzo ezifiselekayo. Uhlelo Ukuhweba uzuza inzuzo enkulu nsuku zonke.
Isu lokuhweba Strike Fx EA sisekelwe eqinisweni eyaziwa ukuthi cishe i-80% isikhathi imakethe ihlala esigabeni "esisezingeni eliphansi," okusho ukuthi intengo ayikho ukunyakaza okuphawulekayo kunoma yikuphi ukuqondisa, isikhathi eside noma esifushane. Esigabeni esiphansi, intengo evame ukuhamba phakathi kwemingcele engenhla nengaphansi yesiteshi sokuhweba.
Ngokusekelwe kulokhu okushiwo, i-Expert Advisor ibeka ukuhweba kwayo kokuqala ngokumelene nokunyakaza kokugcina kwentengo, ecabanga ukuthi cishe cishe intengo izobuyisa inani layo elilinganiselwe. Uma intengo ishiya isiteshi sokuhweba futhi iqhubekela phambili kulokhu, u-EA uyokwengeza imisebenzi emisha futhi akhulise isikhundla esiphelele.
Lapho wokudonsa emuva yentengo kwenzeka, Strike Fx EA uvala yonke ibhasikidi yama-oda. Noma, kwezinye izimo, i-oda ngalinye, kuye ngokuthi isimo semakethe kanye nezilungiselelo.
Incazelo yecebo lokuhweba kuze kube manje libukeka lifana kakhulu nelinye leminye eminye ye-martingale EA, etholakala emakethe. Ngakho-ke, uyini isici esiyinhloko Strike Fx EA okwenza kube kuhluke kakhulu kwabanye abacebisi abahloli?
isiteleka Fx EA - Ezinye Izici Ezengeziwe Zalesi Softhiwe Yokuhweba Forex
Kokuxazulula of Strike Fx EA wukuthi lubeka abathengisa ngabanye at ngezikhathi fixed kwesikhathi. Lapho isikhathi esilandelayo slot kwenzeka, Forex Robot ihlaziya nezimo zezimakethe futhi ubeka kuye kwavela uhwebo olusha noma uvala eyodwa noma eziningana abathengisa ekhona. Ngamanye amazwi, lo logic ukuhweba lokhu Bot FX awumi ndawonye kodwa njalo siguqula futhi uzivumelanise izimo emakethe langempela.
Le ndlela kakhulu ezahlukene kusukela ethandwa okuthiwa igridi martingale ndlela, lapho abathengisa entsha kunezelwa kubhasikidi ngemva intengo ihamba inombolo enqunyiwe Pips. Phakathi emakethe neziyaluyalu, ukwenza kwemizwelo ngokushesha kakhulu ukuthi lisibekele amakhulu Pips intengo waziwa. uhamba okunjalo kwasho yentengo kungaba "ngidilize" yimuphi igridi static. Akukhona kanjalo Strike Fx EA. Ngesikhathi emakethe asebenzayo, lokhu Isazi Advisor ivula abathengisa kude nomunye, kanti on emakethe obuthakathaka, kungaba ukuvula abathengisa eziningana abantu abahlobene eduze njengamadodana 5 Pips.
Strike Fx EA ine algorithm e-build nokuphathelene ukuthi uphikisa izimo ezinjalo. Lokhu algorithm kuhilela tinhlobo letehlukene logics ukuvala oda Ukuhweba. Ngesikhathi wokudonsa emuva yentengo, uchwepheshe Advisor izovala yonke ubhasikidi kwe-oda uma wokudonsa emuva unamandla ngokwanele ukuba alethe yonke ubhasikidi inzuzo. Uma wokudonsa emuva ayinamandla, lokhu Forex Robot kuzovala eyodwa kuphela noma eziningana oda kubhasikidi. Ngale ndlela, Strike Fx EA kunciphisa umthwalo kwidiphozi uma kwenzeka intengo iqhubeka nokunyakaza kwayo okuhamba phambili ngemuva kokudonsa okuncane.
isiteleka Fx EA - What You Get With This Forex Trading System
Strike Fx EA yenzelwe ngidayisa on EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURGBP, EURAUD, GBPCAD, GBPCHF futhi AUDNZD ama-currency pair kanye nohlaka lwe-1 yesikhathi. Ungaqala ngokuncane nje nge-50 $. Ngenxa yalokhu, uzodinga i-akhawunti eyikhulu enezinga elincane le-0.01.
Sincoma asizakale 1: 500, njengoba kwenza intuthwane umthwalo marginal on idiphozi yakho. Kodwa isebenzisa ezincane like 1: 300 and 1: 200 nazo zingaba khona.
Strike Fx EA inesimiso esivelele kakhulu nesifanelekayo sesimiso. Zingahle zilungiswe ukuvumela lo Meluleki wezobuchwepheshe ukuthi athengise ngempumelelo cishe noma yikuphi ukubili kwezimali. Ukuhweba kanyekanye kuvula amathuba amaningi ekwenzeni i-portfoliyo ehlukene yokuhweba kanye nezingozi ezilinganiselwe kakhulu. Okwamanje abadali bale software bahlinzeka ngezilungiselelo ezinconywayo zezinkampani zezimali ze-8; ngoba izilungiselelo eziningi zombili ezinamazinga ahlukene wokuhlukumeza ziyatholakala. Zonke izilungiselelo ziphuma mahhala kubasebenzisi bethu. Imiyalo eningiliziwe mayelana nokuqala nokulungisa Strike Fx EA kanye oncomekayo ukwesekwa lobuchwepheshe anikezwa.
Strike Fx EA ukuhweba kusukela ekuvukeni kwemakethe ngoMsombuluko kuya emakethe evala ngoLwesihlanu. Ungashintsha ikhompiyutha ngezimpelasonto namaholide asebhange kodwa akudingekile. Ukusetshenziswa kwevisi ye-Virtual Privat Server (VPS) Kunconywa kepha akudingeki.
Kukhona amathuba lifiphele kakhulu ukwehluleka ne Hamba Fx EA. Abadali bale software baqinisekisa a ezingaphezu kuka 63% impumelelo rate futhi uyophinde uhlinzeke imiphumela abaqinisekisiwe.
Inqubomgomo Yokubuyiselwa: Uma nganoma yisiphi isizathu awunelisekile ngalo mkhiqizo, umdayisi uqinisekisa ukuthi ubuyiselwe imali egcwele ezinsukwini ezingu-30 kusukela ngosuku lokukhokha. (KUPHELA ilayisensi enokuvikela mqllock.)
Strike Fx EA itholakala ngokushesha ngentengo kungakholeki, ie kuphela $ 179. Ngakho ungalindi ukuba adonse ikhophi yakho!
Vakashela Iwebhusayithi esemthethweni Strike Fx EA
Isiteleka Fx ukubuyekeza
Shaya Fx Ukuhweba Bot
Isiteleka Fx Ukuhweba Robot